70 Dzakanunura Pamoyo Pfungwa Pfungwa | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 70 Dzununuro dzePamunamato Pfungwa
Vagaratia 5: 1:
Personal sanitization yemweya yakanaka kwazvo nguva nenguva. VaKristu vazhinji vanongonamata minamato yekuzvidzivirira, vanonamata chete kana varwiswa, kurwisa kwadhiyabhorosi Tinofanira kunzwisisa kuti munamato inosimbisa pamweya uye patinonamata nguva dzose, hatigone kuve panjodzi yekurwiswa nadhiyabhori. Kunamata mukati nekubuda mumwaka kunotichengetedza zvakanyanya kubva kumiseve yerima. Jesu akaudza vadzidzi vake, 'namatirai kuti murege kuwira mukuedzwa' Mateo 26: 41. Unonamata kuti ukunde miedzo, haumiriri miedzo inouya usati wanamata. Ini ndanyora makumi manomwe makumi mapfumbamwe emunamato ekununura, kuti ndikupise iwe pachako. Aya minyengetero yekununura wega ndeye kumutsidzira iwo moto wemunamato muhupenyu hwako zvakare.
Jesu akatiudza kuti tinamate tisina kupera simba kana kukanda mapfumo pasi, Ruka 18: 1. Tinofanira kuchengetedza moto muhari yedu yemunamato uchipfuta, chero chinogona kukutadzisa kunamatira, chinogona kukutadzisa kunakidzwa. Paunorega kunamata, iwe unova chinhu chakapambwa kuna dhiabhori. Iyi minamato yekununura yega pachinzvimbo ichashayisa mabasa ese ehumambo yerima muhupenyu hwako. Ichakusunungura kubva muhusungwa hwadhiyabhori hwaakakuchengeta mukati. Sezvo iwe uchiita minamato iyi mukutenda, kutambudzika kwese kwadhiabhori muhupenyu hwako kuchaparadzwa muzita raJesu. Simba rako pamusoro padhiabhori nemadhimoni ake richasimbiswa kana kumiswazve muzita raJesu.
1. Ini ndinopikisa kupikiswa kwese, ndinoteverera vese vanoteverera, ndinodzvinyirira munhu wese anodzvinyirira, muzita raJesu.
2. Vagadziri vese vejoko, simuka, takura joko rako ufe, muzita raJesu.
3. Ndinozvisunungura kubva mukusvibisa kwese kwemadhimoni, muzita raJesu.
4. Ndinozvisunungura kubva mukusvibisa kwese kwemadhimoni, kunobva muchitendero chevabereki vangu, muzita raJesu.
5. Ndinozvisunungura kubva pakusvibiswa nemadhimoni, zvichibva mukuzvibata kwangu kwese kwakaita munamato yedhimoni, muzita raJesu.
6. Ndinosununguka pazvifananidzo zvese nehukama hwakabatana, muzita raJesu.
7. Ini ndinozvisunungura, kubva pakurotwa kwese kurota, muzita raJesu.
8. Zvese satanic kurwisa, zvinopesana nehupenyu hwangu mumaroto angu, shandurwa kuve kukunda, muzita raJesu.
9. Nzizi dzese, miti, masango, shamwari dzakaipa, vateveri vezvakaipa, mifananidzo yehama dzakafa, nyoka, mweya yemadzimu, vakadzi vemweya uye masquerades akanangana neni muhope, ngaapedzwe chose nesimba iropa raIshe Jesu.
10. Hese wakashata wakashata muhupenyu hwangu, buda nemidzi yako yose, muzita raJesu!
11. Vatorwa vasingazivikanwe mumuviri wangu, huyai mese kubva kunzvimbo dzenyu dzekuvanda, muzita raJesu.
12. Ini ndinobvisa chero chatinoziva kana kusaziva neyemadhimoni madekiseni, muzita raJesu.
13. O Ishe, nzira dzose dzekudya kana dzekunamata dzakapfigwa, muzita raJesu.
14. Ini ndinobuda uye ndageza chero chikafu chinodyiwa kubva patafura yedhiabhori, muzita raJesu.
15. Zvinhu zvese zvisina kunaka zvinotenderera muropa rangu rerukova, buda ubate moto, muzita raJesu.
16. Ndinozvifukidza neropa raJesu.
17.Mweya Mutsvene moto, ndinatsei kubva kumusoro kwemusoro wangu kusvika kutsoka dzangu. Tangidza kududza nhengo yese yemuviri wako; itsvo, chiropa, matumbo, ropa, nezvimwe. (Tora chikamu ichi zvishoma nezvishoma uye unotarisira kuti moto wekuchenesa weMweya Wakachena kuti uchenese zvizere).
18. Ini ndakazvitema kubva pese mweya yekuchiva muzita raJesu.
19. Ndinozvinunura pachirwere chega chega cherima, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
20. Ndinozvinunura pachangu pamavambo emadzitateguru, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
21. Ndinozvinunura pachangu kubva kuhurongwa hwese hwakaipa, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
22. Ndinozvinunura parudzi rwese rweurombo, kushayiwa uye kushaya, kubva kunheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
23. Ini ndinozvinunura panjodzi dzose dzaSatani, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
24. Ndinozvinunura paruoko rwese rwechioko, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
25. Ndinozvinunura pachangu zvidhori zvakaiswa kubva pane hwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
26. Ini ndinozvinunura pachimiro chose chekusvibiswa kwepabonde kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, mune
27. Ndinozvinunura kubva kun'anga dzese dzakabatanidzwa, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
28. Ndinozvinunura kubva mumweya webarika, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
29. Ndinozvinunura kubva muhusungwa hwetsika, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
30. Ndinozvinunura pese pakurotwa kwekurota, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
31. Ndinozvinunura pese pese pamunyadzi, Kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
32. Ndinozvinunura pachangu pakutuka kwemadzitateguru, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
33. Ini ndinozvinunura kubva mundangariro dzangu dzese, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
34. Ndinozvinunura kubva kumweya wega wega wemhuka, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
35. Ndinozvinunura kubva mukutonga kwemasimba emugungwa, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
36. Ndinozvinunura kubva kumweya wehunyengeri, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
37. Ndinozvinunura kubva kumweya wedabond, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
38. Ndinozvinunura kubva mukusagona, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
39. Ndinozvinunura kubva kune wese akasimba masimba, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
40. Ndinozvinunura mumweya wekufa negehena, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
41. Ndinozvinunura pachinhu chose cheuroyi, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
42. Ndinozvinunura kubva pakusvibiswa kweropa, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
43. Ndinozvinunura mumweya wekusvibiswa, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
44. Ndinozvinunura pambeu imwe neimwe yekusava nesimba, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
45. Ndinozvinunura pachimiro chese kusagadzikana, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
46. ​​Ndinozvinunura pachinyadzo, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
48. Ndinozvinunura pachangu mukukundikana kwechishamiso changu, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
49. Ndinozvinunura kubva kuupofu hwomweya, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
50. Ndinozvinunura parutivi rwekusaziva pamweya, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
51. Ndinozvinunura kubva pakupera kwakashata, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
52. Ndinozvinunura padera pekutukwa nekutuka kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
53. Ndinozvinunura kubva kumweya yakajairika, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
54. Ndinozvinunura pane zvakaipa maitiro, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
55. Ndinozvinunura pachisungo chemugungwa, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
56. Ndinozvinunura pachangu chakaipa, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
57. Ndinozvinunura pese pakurwiswa nemadhimoni, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
58. Ndinozvinunura kubva mumweya wevakafa, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
59. Ndinozvinunura kubva pamararamiro ese ehupenyu, kubva kune hwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
60. Ndinozvinunura parufu rusina kufanirwa, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
61. Ndinozvinunura kubva mukusagadzikana kwepfungwa kubva kune hwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
62. Ndinozvinunura pfumo rega rega rekuvhiringidzika, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
63. Ndinozvinunura pachirwere nezvirwere, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
64. Ndinozvinunura pachangu pakutukwa kwevabereki, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
65. Ndinozvinunura parufu rwechisimba, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
66. Ndinozvinunura pachangu pazvinhu zvisingaite, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
67. Ndinozvinunura kubva mukutsamwa kusingadzoreki, kubva pahwaro hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
68. Ndinozvinunura kubva kumanzwi anoshamisa aSatani, kubva panheyo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
69. Ini ndakazvitema kubva pese pamadzinza uye nekutuka, muzita raJesu.
70. Ini ndakazvitema kubva pese pamhepo yenyika uye nekutuka, muzita raJesu.
Baba ndinokutendai nekuda kwekukununurwa kwangu kuzita raJesu.
Previous nyaya15 Tinamato une simba Pamusoro peBherizebhuri
inotevera30 Minamato Yekununura Kunamatira
SIXMUND Nyamavhuvhu 1, 2019 Na 10:36 pm
Ini ndakadzidza zvimwe chinhu kuHumambo hwaMwari,
Gillian murume Nyamavhuvhu 26, 2020 Na 12:12 pm
Ndinokutendai neminamato yese iyi yavakanyatsondibatsira. Ndiri kufara kuti ndawana ino webhusaiti. Ndinokutendai kubva pasi pemoyo wangu. Mwari vakuropafadzei mose zvikuru ❤️ ppl 😊
Kuwedzera Kwaungaita Hupenyu Hwako hweMunamato Muna 2020
Pfungwa dzeMunamato Kubva Kudonha Mukuyedzwa